Darawal Gaari BL Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho – Goobjoog News
Askari ka tirsan ciidan booliska Soomaaliya ayaa Dawal gaari B L ah ayaa bwaxa uu ku dilay dagmada Hodan ee gobalka Banaadir.
wararka ay heshay Goobjoog News ayaa sheegaya in agagaarka Seeybiyaano askari ku sugnaa uutoogtay nin ahaa Dawal Gaari B L nuuca loo yaqaano Hoomay-da.
warar kale duwan ayaa ka soo baxayo sida dilka uu udhacay, wararka qaar ayaa tibaaxaya in askariga dilka geystay iyo Darawalka uu soo kale dhex galay muran, ka dibna askarigu uu sidaas dilay ninka darawalka ahaa.
Ciidamada ammaanka iyo dad shacab ah oo goobta soo gaaray ayaa qaaday meedka marxuumka la dilay, halaka askarigii dilka geystayna uu goobta ka baxsaday.
Askarta Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa mararka qaarkood waxaa ay gudaha Magaalada Muqdisho dilal kala duwan u geystaan Darawalada Mooto Bajaajta iyo kuwa ka shaqeysta gaadiidka ay raacaan dadweynaha ee BL-ka.